प्रचण्डलाई प्रश्न :- ‘सडकमा प्रहरी र कार्यकता किन भि’डाउनुभयो ?’ – Nepal Online Khabar
फागुण १६, २०७८ सोमबार 230
काठमाडौं : सोमबार खुमलटार निवासबाट सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संसदबाट व्याख्यात्मक घो’षणासहित पारित भएको अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम
च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) सम्झौताबारे पत्रकारलाई झण्डै एक घन्टा आफ्नो कुरा सुनाए । अध्यक्ष प्रचण्डले सडक आ’न्दोलनदेखि अहिलेको यात्रासम्म आइपुग्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए । एमसीसीका कारण देश दु’र्घटनाबाट बचेको र नेपाली सबैको जित भएको पनि उनको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्ना कुरा राखेपछि पत्रकारले उनलाई प्रश्न तेर्साए । ‘यहाँसम्म आइपुग्नलाई प्रहरी र कार्यकता किन भिडाउनुभयो ?’प्रचण्डले सबैको मेहनतले व्याख्यात्मक घो’षणाएसहति एमसीसी पारित भएको भनाइ राखे । उनले यदि चुपचाप बसेको भए यस्तो अवस्था सिर्जना नहुने पनि बताए ।
‘मैले संसदीय दलको बैठकमा राष्ट्रघात नहोस भनेर ख’बरदारी गर्नेलाई धन्यवाद दिएको छु । अस्तिसम्म यथास्थितिमा एसमीसी पास हुँदैन भन्ने मै हुँ नि । सबैको मेहनत नभएको भए व्याख्यात्मक घो’षणासम्म आउने थिएन । त्यसकारण यसको सम्बन्ध त्यहाँ छ है ।
यसो भए पछि अमेरिकाले पनि नयाँ वेय आउट दिन पर्यो नि भन्दै कहीँ न कही नेपाल नराम्रोसँग विभाजित हुने अमेरिकालाई पनि लाग्यो । नेपाली कांग्रेसलाई पनि लाग्यो । हामी त बहस गर्दै थियौँ ।
त्यसपछि कानूनी प्रावधान व्याख्यात्मक घो’षणासम्म आइपुग्यौ,’ अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘चुपचाप बसेको भए त यो स्थिति हुन्थ्यो त ? यो सबैको पहलकदमीले समाधानको बिन्दूमा आइपुग्न सफल भएका छौँ । त्यसकारण आधिकारीक रुपमा आन्दोलनकर्मी सबैलाई धन्यवाद दिएको छु । अब, प्रस्ताव त एउटै बनाइयो नि ! त्यसैले यो बनाउन मद्धत गर्ने सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु ।’
Prev‘एमसीसी पास भएपछि अमेरिका खुसी’, भन्यो :- “नेपालमा अझै अपत्यारिला परिवर्तनहरू हुनेछन्” !
Nextएमालेले आज एमसीसीबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै !